IMamelodi Sundowns ifuna abagadli ababili bangaphandle
INGASE iphenduke isinkwa semihla imibhiyozo enje kuMengameli weMamelodi Sundowns, uPatrice Motsepe, nabadlali bakhe uma iphumelela imizamo yakhe yokuthola laba bagadli okuthiwa ubafuna ngaphandle Isithombe: BACKPAGEPIX
NHLANHLA SITHOLE | May 23, 2020
UKUQHUBEKA nomkhankaso kamengameli weMamelodi Sundowns, uPatrice Motsepe, wokubumba inqanawe yeqembu elingezokugcina ngokukukhonya eNingizimu Afrika kuphela kodwa ezwenikazi lonke i-Afrika kuholele ekutheni aphahluke ngesikhathi kunesithangami sabezindaba ngoLwesine lapho ethe khona iqembu lakhe lisemizamweni yokuthola abadlali ababili okungabangaphandle kwemingcele yakuleli.
Nokho ubuye wazibamba uMotsepe akangabe esanda nemininingwane yokuthi bangobani nokuthi baqhamuka kumaphi amazwe.
UMotsepe ukusho lokhu emuva kokumemezela ngesivumelwano esisha seminyaka emine, umqeqeshi waleli qembu uPitso Hamilton "Jingles" Mosimane, asisayinile naleli qembu eselithathwa ngomacaph'nakusale ngendlela elisayina ngayo abadlali abanohlonze futhi abamba eqolo.
"Sakha iqembu elingezogcina ngokuqhudelana namaqembu alapha ekhaya kuphela kodwa namakhulu ezwenikazi i-Afrika. Njengamanje sisenenkinga yokuthola abadlali ababili bangaphandle."
Ophenyweni olwenziwe yi Solezwe ngeSonto lithole ukuthi labadlali ngabagadli ababili. Ngokuthola kwaleliphephandaba omunye uqhamuka e-Algeria kanti lona omunye ungowaseMorocco.
Imizamo yokuthola amaqembu abawadlalelayo namagama abo ayiphumelelanga.
Umthombo weSolezwe ngeSonto awukwazanga ukuwaveza ngenxa yokuthi kuseyinto ekhulunyelwa emahhovisi amakhulu okungakafuneki ukuba iphumele ngaphandle ngoba kungaphazamisa izinhlelo.
"Engingakusho nje wukuthi abaqeqeshi bakholelwa wukuthi labagadli uma bangase batholakale, kuzobanzima kubadlali basemuva emaqenjini akuleli elizokwazi ukumelana nenhlanganisela yabo."
Ngokunjalo noMosimane ezibongela ngokwethenjwa kwakhe ngokunikwa umsebenzi onzima wokuhola iqembu elinjenge Sundowns uphinde wathembisa umengameli weqembu ngokuthi bazosebenza kanzima ekutheni baphinde bengeze ngenkanyezi yesibili yeChampions League.
Ukukhuluma kanje kukaMotsepe kusho ukuthi kukhona abadlali bakhe bangaphandle abaulelwa yizembe kwazise usagcwele uphawini wabadlali bangaphandle kwiSundowns.
Lokho kubeka ikusasa lika-Ali Mezza noBangaly Soumahoro.